Association for Financial Professionals Partners with Matrix Institute of Professionals on CTP, FP&A
"This collaboration with Matrix Institute of Professionals was ideal as AFP seeks to help financial professionals throughout the Asia-Pacific region be successful"
~ Himashi Soriano, Managing Director, APAC, Association of Finance Professionals
*Association for Financial Professionals (AFP) ၏ အရည်အသွေးမြင့်မားသော FP&A နှင့် CTP Designations များ၏ Exam Prep Program များကို မြန်မာနိုင်ငံရှိ accounting and finance professionals များ အားလုံး မကြာမီတွင် Matrix Institute of Professionals မှတစ်ဆင့် တက်ရောက်နိုင်တော့မည်ဖြစ်ပါသည်။*
ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ဇွန် ၂၃၊ ၂၀၂၀ / PRNewswire / -
Matrix Institute of Professionals သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ စာရင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင်များ အတွက် The Association for Financial Professionals (AFP) ၏ International Certification Exam Prep Courses များကို သင်ကြားပို့ချရန် တရားဝင် partner အဖြစ် ရောက်ရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။ Exam Prep Program များတွင် Financial Planning & Analysis (FP&A) Professional နှင့် Certified Treasury Professional (CTP) Designations များကို မိမိတို့၏ Career Development အနေဖြင့် ဆည်းပူးနိုင်ပြီဖြစ်ပါသည်။
AFP မှ ပေးအပ်ချီးမြှင့်သော FP&A credential တွင် corporate financial planning and analysis profession အတွက် အဓိကလိုအပ်သော အရည်အသွေး များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့်အပြင် ပုံမှန် Degree တစ်ခုတွင် ပါလေ့မရှိသော Practical Area များကို အခြေခံခိုင်မာအောင်လေ့လာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Financial Planning & Analysis (FP&A) –လုပ်ငန်းတစ်ခု၏ စီမံကိန်း၊ ဘတ်ဂျတ်၊ အနာဂတ် မဟာဗျူဟာနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ တို့ကို အသုံးချသည့် Corporate Financial Planning and Analysis ပညာရပ် ဖြစ်ပါသည်။
FP&A Role အတွက် လိုအပ်သော Skill set များ အဓိကထားသင်ကြားပေးသည့် တစ်ခုတည်းသော credential လက်မှတ် တစ်ခုဖြစ်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး၏ ရှေ့ရေးကို ခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သော အရည်အသွေးများကို ဖြည့်ဆည်းပေးမည် ဖြစ်ပါသည်။ FP&A ရရှိပြီးထားသော Professionals တစ်ယောက်သည့် လုပ်ငန်းတွင်ရှိသော မသေချာမရေရာမှုများ လျော့ချနိုင်သည့်အပြင် လုပ်ငန်းရှိ ကိန်းဂဏန်းများ၏ နောက်ကွယ်က အဓိပ္ပါယ်များ ကိုပါ သေချာလေ့လာ စမ်းစစ် သုံသပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။
လုပ်ငန်း၏ဦးတည်ချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အဖက်ဖက်မှပြီးပြည့်စုံသည့် မဟာနည်းဗျူဟာများချမှတ်ခြင်း၊ ဘတ်ဂျက်ရေးဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းအတွက်လို့အပ်သော အနာဂတ်အတွက် ခန့်မှန်းချက်များချမှတ်ရေးဆွဲခြင်းများတွင် အကောင်းဆုံး လုပ်ဆောင်နိုင်သူများဖြစ်ကြသည်။
Certified Treasury Professional (CTP) – ကော်ပိုရိတ် သို့ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု (Currency and Liqudity Management)၊ လည်ပတ်ငွေအရင်းအနှီး (Working Capital)၊ မတည်ငွေ တည်ဆောက်ပုံ (Fund Raising, Capital Structure)၊ ဆုံးရှုံးနိုင်ခြေ စီမံခန့်ခွဲမှု (Financial Risk Management) စသည်တို့ကို အသုံးချသည့် ပညာရပ်ဖြစ်ပါသည်။
CTP Designation သည် ဘဏ္ဍာရေး နှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အလုပ်အကိုင် ပညာရပ်တွင် ကျွမ်းကျင်မှု စံနှုန်းတစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရပြီး ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် Corporate ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်များအတွက် အသိအမှတ်ပြု ခြင်းခံထားရသည့် လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ AFP မှ ပေးအပ်ချီမြှင့်သော CTP Credential လက်မှတ်ကို ကိုင်ဆောင်ထားသည့် ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင်များ အတွက် corporate ၏ liquidity, capital နှင့် risk management ဆိုင်ရာများအား ထိရောက်စွာ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အသိပညာနှင့် အရည်အချင်းများကို ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက် ပြီးဖြစ်ကြောင်း ပြသည့် လက်မှတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Matrix institute of Professionals နှင့် AFP တို့ ပူပေါင်း၍ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင်များ အတွက် အထက်မှာဖော်ပြခဲ့သော နိုင်ငံတကာတွင် တန်ဖိုးထားဂုဏ်ယူရသည့် Designations များကို ရယူနိုင်သည့် လမ်းကြောင်း အသစ်များ ဖော်ဆောင်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
သင်တန်းသားတစ်ဦးစီဟာ Matrix Institute တွင် နိုင်ငံအတွင်းရှိ အတွေအကြုံရင့် Instructors များမှ ကိုယ်တိုင် သင်ကြားပို့ချမည့် သင်ခန်းစာများ နှင့်အတူ Online မှ တဆင့် Blended Learning ပုံစံများနှင့်ပါ လေ့လာသင်ယူခွင့်ရမည့်ဖြစ်သည်။
"This collaboration with Matrix Institute of Professionals was ideal as AFP seeks to help financial professionals throughout the Asia-Pacific region be successful,"
~ Himashi Soriano, Managing Director, APAC.
"This path to earning AFP's dual certifications will help practitioners throughout Myanmar distinguish themselves among their peers."
"We believe Myanmar Accounting and Finance Professionals now have access to highly regarded professional credentials from AFP andaContinuing Professional Development path to advance their careers. We aim to produce highly qualified Myanmar finance professionals for the growing corporate environment, and introduction of FP&A and Treasury designations isagreat initial step,"
Mr. Min Han Tun, Co-Founder and Academic Director of Matrix Institute of Professionals.
မီဒီယာနှင့်ပတ်သတ်သောမေးခွန်းများရှိပါက Melissa Rawak၊ mrawak@afpoline.org၊ … info@matrixinstitute.com.mm သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Association for Financial Professionals (AFP) အဖွဲ့အစည်း သည် Washington, D.C. ပြင်ပ တွင် ရုံးချုပ်အခြေစိုက်ထားရှိ၍ Singapore ဒေသဆိုင်ရာ ရုံးခွဲတစ်ခု ဖွင့်လှစ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာရှင်များနှင့် သက်ဆိုင်ရာသော အဖွဲ့အစည်းများ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကလုပ်ဆောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
AFP သည် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာပညာရပ်တွင် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု ထိပ်တန်းစံနှုန်းတစ်ခုအဖြစ်လက်ခံထားသည့် Certified Treasury Professional (CTP) နှင့် Certified Corporate FP&A Professional credentials (FP&A) အထောက်အထားလက်မှတ်များ ကို ခိုင်မာအောင်ရေးဆွဲ တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး နှင့် ဆက်လက်၍ အရည်အသွေးနှင့် ပြည့်မှီစေရန် စီမံခန့်ခွဲသည်။
Matrix Institute of Professionals အကြောင်း
မြန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မြို့တွင့် အခြေစိုက်သော Matrix Institute of Professionals သည် Finance နှင့် Entrepreneurship ဆိုင်ရာပညာရပ်များကို သင်ကြားပို့ချနေသော ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး လက်ရှိတွင် အောင်မြင်သော CFA Exam Prep Provider တစ်ခု အဖြစ်ရပ်တည်လျက်ရှိသည်။
ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ One-stop solutions များနှင့် သင်တန်းများ တစ်နေရာထဲတွင် အပြီး ရယူနိုင်သည့် ဝန်ဆောင်မှုများပေးရန်မှာ Matrix ၏ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ပြီ အခြား Mission များဖြစ်သော မြန်မာနိုင်ငံသား ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုကျွမ်းကျင်သော မျိုးဆက်သစ် ပညာရှင်များ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရန် နှင့် SMEs အတွက်လိုအပ်သော ဘဏ္ဍာရေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဆိုင်ရာ ပညာရပ်များကို သင်ကြားပိုချပေးရန် ဦးတည်ချက်များကို ဖော်ဆောင်လျက်ရှိသည်။
Matrix Institute of Professionals တွင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ သင်တန်းသားများ၊ ပညာရှင်များ၊ စွန့်ဦးတည်ထွင်လုပ်ငန်းရှင်များ နှင့် SMEs များအား investment management, corporate finance, financial modeling, financial literacy အစရှိသော finance ပညာရပ်များအတွက် certificates, diplomas, Workshops နှင့် courses များ ကိုဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိသည်။
Matrix Institute of Professionals နှင့် ပါတ်သက်၍ အသေးစိတ်သိလိုလျှင် info@matrixinstitute.com.mm သို့ဆက်သွယ်ပါ။
Logo - https://mma.prnasia.com/media2/508493/Association_for_Financial_Professionals_Logo.jpg?p=medium600
Source: Association for Financial Professionals (AFP)
The Career Journey to CFO (FP&A)
𝐕𝐚𝐥𝐮𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐦𝐞𝐭𝐡𝐨𝐝𝐬 𝐲𝐨𝐮 𝐰𝐢𝐥𝐥 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐤𝐧𝐨𝐰 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐅𝐀 𝐞𝐱𝐚𝐦
𝐌𝐚𝐭𝐫𝐢𝐱’𝐬 𝐅𝐑𝐄𝐄 𝐑𝐞𝐬𝐨𝐮𝐫𝐜𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐒𝐌𝐄